पत्रपत्रिका Archives - HealthyKhabar
काठमाडौं,७ भदौ । जंगल तथा रुखबिरुवाका झ्याङमा पाइने कालो खुट्टा भएको कीरा (किर्ना प्रजाति) ले टोक्दा छालामा बोरोलिया भन्ने कीटाणु सर्छ। त्यसपछि यसले छालामा र पछि गएर शरीरका विभिन्न भित्री अगंमा असर पु-याउँछ। एक वर्षअघि पोखराका एक युवालाई लाइम रोगको शंका लाग्यो। उनी आफैं सचेत भएकाले शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका डाक्टर शेरबहादु्र पुनलाई भेटे। डाक्टर पुनले लाइम रोगको पहिचान गरे। तर नेपालमा प्रयोगशाला परीक्षणको सुविधा नभएकाले उनी यो रोगको उपचारका लागि भारत गए। भारतीय अस्पतालले पनि विदेशमा रगत परीक्षण गर्न पठाएर मात्र उनको रोग यकिन ग¥यो। लाइम रोग लाग्नेहरू नेपालमा धेरै छन्। तर यो रोगबारे धेरैलाई थाहा नभएकाले उनीहरूले रोग पालेर बस्नुपरेको चिकित्सकको दाबी छ। वीर अस्पतालको चर्मरोग विभागका अनुसार सो अस्पतालमा वार्षिक पाँचदेखि सातजना लाइम रोगका बिरामी आइपुग्छन्। उनीहरू दाद भन्दै उपचारका लागि आउने गरेका छन्। चिकित्सकले पनि सुरुमा दादकै उपचार गर्छन्। दादको औषधिले काम नगरेपछि लाइम रोग ठम्याएर थप उपचार गरिन्छ। रोगबारे थाहा नभएकै कारण बिरामी…
रोल्पा,७ भदौ । पाँच वर्षअगाडि मानसिक रूपले बिरामी परेकी त्रिवेणी गाउँपालिका–७ गैरीगाउँ तितिमकी २० वर्षीया विमला पुन अस्पतालले उपचार गर्न नसकेको भन्दै चर्चमा प्रार्थना गर्न थालेपछि निको भएको ठानेर धर्म परिवर्तन गरी अहिले अभियन्ता बनेकी छन्। विमलाको अहिले पाँच महिनाको छोरो छ। बालविवाह गरेकी उनले विवाह गर्ने उमेर नपुग्दै छोरो जन्माइन्। यो गाउँमा उनीजस्ता दर्जनौं किशोरी आमा बनिसकेका छन् ।केही महिनाको उपचारले बिरामी निको नभएकी उनको रोग चर्चले बिसेक भएको भन्दै सबै परिवारले धर्म फेरे। ‘तीन महिनाजति बिरामी भए। धेरै अस्पताल उपचार गरे सन्चो भएन। चर्चमा प्रार्थना गर्न थालेपछि निको भयो।’ गाउँमा रहेको ‘सालम प्रशंसा मण्डली’की विश्वासी विमलाले बताइन्। ‘अहिले धर्म फेर्ने धेरैजसो बिरामी छन्। हरेक शनिबार चर्चमा जान्छौं,’ उनले भनिन्, ‘म त अभियन्ता नै हुँ। अहिले त माइतीले पनि धर्म फेरे।’ उनका अनुसार रहर वा बुझेर चर्च आउनेभन्दा पनि रोग उपचारका लागि आउनेको संख्या बढिरहेको छ। विमलाका अनुसार ‘कतिपय बच्चालाई समेत अस्पतालमा रोग निको नभएपछि चर्चमा ल्याउँछन।’ हिजोआज त्रिवेणीको…
आईसीयू अभावले दिनहुँ १० बच्चाको ज्यान जान्छ
काठमाडौँ,३ भदौ । मुलुकको कुनाकाप्चाबाट अत्यन्त जटिल अवस्थामा रेफर भएर आएका ६ देखि १० जना बालबालिकालाई नचाहँदा-नचाहँदै आईसीयूको लागि बाहिर रेफर गर्नुपर्ने स्थिति रहेको कान्ति बाल अस्पतालका निर्देशक डा.आरपी बिच्छाले गुनासो गरेका छन् ।डा.बिच्छाले उपप्रधान तथा स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादव, स्वास्थ्य राज्यमन्त्री डा.सुरेन्द्र कुमार यादव, स्वास्थ्य सचिव लगायतका उपस्थितिमा सोमबार अस्पतालमा ८ शय्या क्षमताको पेडियाट्रिक इन्टरमिडिएट केयर युनिट (पीआईएमसीयू) को उद्घाटन समारोहमा उक्त दुःखेसो पोखेका हुन् । ‘मलाई थाहा छ उहाँहरु आफ्नो सन्तानको ज्यान जोगाउन घर, जग्गा, गहना बेचेर यहाँ इमरजेन्सी सेवामा आउनु भएको हो,' डा.बिच्छाले भने, ‘हामीसँग बेड हुँदैन, दुःखदायी स्थितिमा नचाहेर पनि बाहिर रेफर गर्छौं ।’ कान्तिको यही कमीकमजोरीले नजिकका अस्पतालहरुको लागि 'कमाइ खाने भाँडो' बनेको समेत उनले उल्लेख गरे । हाल कान्तिमा ५० शय्याको आईसीयूको संरचना रहे पनि मात्र ३० शय्या सञ्चालनमा छ । अस्पतालमा ३० वटा मेडिकल अफिसर र ४० वटा स्टाफ नर्सको दरबन्दी खाली छ । ‘एक दिन अर्थात २४ घन्टाको २४ हजारसम्म लिन्छन् यस्ता अस्पतालले, एक/दुई…
दुइ हजार माइक्रोबायोलोजिस्ट लाइसेन्सविहीन
काठमाडौँ,२ भदौ। अस्पतालजन्य संक्रमण र सरुवारोग नियन्त्रणका लागि उत्पादित माइक्रोबायोलोजिस्ट जनशक्ति दर्ता हुन नसक्दा उनीहरू बेकामे भएका छन् ।त्रिभुवन विश्वविद्यालयको विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थानमा स्नातकोत्तर अध्ययन गरेका मेडिकल र जनस्वास्थ्य गरी २ हजार माइक्रोबायोलोजिस्ट जनशक्ति दर्ता हुन नसक्दा उनीहरू अन्योलमा परेका हुन् । संस्थानले ३० वर्षदेखि उत्पादन गर्दै आइरहेको यस्ता जनशक्तिलाई नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्ले दर्ता गर्न मानेको छैन । दर्ता हुन नसक्दा अधिकांश जनशक्ति विदेश पलायन हुन बाध्य भएको त्रिवि विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थान केन्द्रीय माइक्रोबायोलोजी विभागका प्रमुख डा. मेघराज बञ्जाराले बताए । उनका अनुसार उत्पादित ८० प्रतिशत जनशक्ति अवसरको खोजीका जापान, क्यानडा पुगेका छन् । संस्थानबाट माइक्रोबायोलोजीमा स्नातकोत्तर गरेका २६ ब्याज जनशक्तिलाई राज्यले प्रयोग गर्न सकिरहेको छैन । संस्थानबाहेक त्रिविको चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान, काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट पनि यस्ता जनशक्ति उत्पादन भइरहेका छन् । जहाँबाट वार्षिक १० जनाको हाराहारीमा माइक्रोबायोलोजिस्ट उत्पादन हुन्छन् । मेडिकल कलेजबाट उत्पादन हुने माइक्रोबायोलोजिस्टले भने सजिलै लाइसेन्स पाइरहेका छन् । मापदण्डअनुसारै पाठ्यक्रम र पूर्वाधार बनाएर विद्यार्थी पढाए पनि परिषद् कहिल्यै अनुगमनमा नआउने…
युवा पुस्तामा कन्ट्याक्ट लेन्स: आवश्यक भन्दा बढी फेसन
काठमाडौँ, २६ साउन । आँखा कमजोर भएकाका लागि मोटो चस्माको विकल्पका रूपमा रहेको कन्ट्याक्ट लेन्स अहिले फेसनकै रूपमा लगाउन थालिएको छ । आँखाको शल्यक्रिया गर्न नचाहनेहरू अहिले चस्माको सट्टा कन्ट्याक्ट लेन्सतर्फ आकर्षित भएको पाइएको छ । आफ्नो आँखा कमजोर भएको अरूलाई थाहा नहोस् भनेर मानिसहरूले कन्ट्याक्ट लेन्स प्रयोग गर्न थालेका हुन् । आँखाको पावर माइनस ३ देखि माइनस ४ हुन्छ, त्यस्तो समस्यालाई लासिक भनिन्छ । यो समस्या भएका व्यक्तिहरूले हाई पावर भएको मोटो चस्मा लगाउनुपर्छ । यस्तो समस्या भएका मानिस प्रायःजसो आँखाको शल्यक्रिया गराउने गर्छन् । जो मानिस शल्यक्रिया गर्न डराउँछन्, उनीहरूले चस्मा र कन्ट्याक्ट लेन्स प्रयोग गर्ने गरेको चिकित्सकको भनाइ छ । लायन्स आँखा अस्पतालका डा. अर्चना पोखरेलले कम उमेरमा धेरै पावरको चस्मा लगाउनुपर्ने भएकाले पनि कन्ट्याक्ट लेन्सप्रति मानिसको चासो बढ्दै गरेको बताउनुभयो । उहाँ भन्नुहुन्छ, “कन्ट्याक्ट लेन्सको प्रयोग गरेपछि चस्माको प्रयोग गर्नु पर्दैन भने लेन्सको प्रयोगपछि आफ्नो आँखाको पावर कम छ भनेर अरूले थाहा पनि पाउँदैनन्, त्यसैले लेन्सका…
धरानमा घरैपिच्छे डेंगु, चार हजार संक्रमित
सुनसरी,२१ साउन । धरानमा तीन महिना बितिसक्दा पनि डेंगु नियन्त्रण हुन सकेको छैन । यहाँ करिब ४ हजार जना डेंगु भाइरसबाट संक्रमित भइसकेका छन् । साउनमा मात्र ७ सय २० जना बिरामी थपिएका छन् । धरानका हरेकजसो घरमा डेंगुका बिरामी भेटिइरहेका छन् । कतिपय घरमा सात जनासम्म संक्रमित छन् । एडिस एजिप्टाई र एडिस एल्बोपिक्टस जातको पोथी लामखुट्टेले पानीमा पारेका अन्डा, लार्भा र प्यूपा नस्ट नगरिँदा डेंगु नियन्त्रण हुन नसकेको हो । एउटै सहरमा धेरैजना संक्रमित भएपछि प्रदेश १ को प्रदेशसभाले धरानलाई ‘डेंगु संकटग्रस्त क्षेत्र’ घोषणा गरिसकेको छ । उपमहानगरपालिका कार्यालयले डेंगु नियन्त्रणमा ३० लाख रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ । चारवटा फगिङ मेसिन खरिद गर्दा मात्र ३ लाख ८० हजार खर्च भएको छ । यसबाहेक डिजल, साइफर मेथ्रिन, प्राविधिकलाई भत्ता सुविधा र जनचेतना कार्यक्रम सञ्चालनमा खर्च भएको छ । डेंगु संक्रमणको दर घटेको छैन । बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले दैनिक २० देखि २५ जना उपचार गर्न आउने गरेको जनाएको छ । अरू निजी क्लिनिक र अस्पतालमा पनि बिरामी उतिकै छन् । डेंगु…
चिकित्सकको परामर्श शुल्कमा तोकिएभन्दा ६० प्रतिशत वढी रकम असुली
काठमाण्डौं,११ साउन । देशभरका निजी तथा सरकारी अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकले अस्पताल पिच्छे फरक–फरक शुल्क असुल्दै आएको पाइएको छ । केही अस्पताल र सम्बन्धित चिकित्सकले प्रतिबिरामी तोकिएभन्दा ६० प्रतिशतसम्म बढी रकम लिने गरेको पाइएको हो । अस्पताल सञ्चालनलगायतका विभिन्न बहाना देखाउँदै बिरामीबाट एक हजार रुपैयाँसम्म बढी शुल्क लिने गरिएको पीडित बिरामीको गुनासो छ । अस्पतालले बिरामीसँग लिने शुल्क निर्धारण तथा नियमन गर्ने सरकारी संयन्त्रले प्रभावकारी ढंगले अनुगमन नगर्दा उपचारका लागि आउने बिरामीसँग मनोमानी ढंगले शुल्क लिने गरिएको छ । सम्बन्धित अस्पतालले चिकित्सकको शुल्कसम्बन्धी व्यवस्थालाई समेत सूचना पाटीमा टाँसेका छैनन् । यसकारण, बिरामीहरू मनपरी शुल्क तिर्न बाध्य छन् । स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नति मापदण्डसम्बन्धी निर्दे्शिका २०७० को दफा ३० को अनुसूची ७ मा सेवा शुल्क निर्धारण समितिको व्यवस्था उल्लेख छ । स्वास्थ्य संस्थाले उपचारका नाममा मनोमानी शुल्क लिन नसकून भनेर यो समितिको व्यवस्था गरिएको थियो । जसमा अध्यक्ष स्वास्थ्य सचिव हुने र सदस्यमा वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको प्रथम श्रेणीको प्रतिनिधि,…